Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Ka tagista Daabacaadda Cagaaran inta lagu jiro Fasaxa Seychelles
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Waajib ah • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Iyada oo caan ku ah quruxdeeda qaaliga ah, Seychelles waxay magac u samaysatay inay tahay meel waara oo firfircoon oo ku dhawaad ​​47% dhulkeeda la ilaaliyo lana aqoonsaday dadaalkeeda baaxadda leh si loo ilaaliyo dhaxalkeeda dabiiciga ah ee hodanka ah iyada oo loo marayo dhaqammo iyo tallaabooyin waara.
Seychelles waa meel ku-meel-gaadh ah oo abaal-marin ku leh gobolka Badweynta Hindiya.
Jasiiradaha Seychelles waxay noqdeen meeshii ugu horraysay ee lagu abuuro bulshadeeda onleenka ah ee shabakadda Shabakadda Saamaynta Caalamka.
Kani waa madal dhijitaal ah oo u saamaxaya adeegsadayaasha inay la socdaan cabbiraadda oo ay soo bandhigaan tallaabooyin waara iyada oo loo marayo madadaalo iyo caqabado la gaari karo oo ku saabsan arrimaha dunida dhabta ah.
Seychelles ayaa 38aad ka gashay Tusaha Waxqabadka Deegaanka 2020, marka hore Gobolka Saxaraha ka hooseeya iyo sida jasiirad yar; Ilaalinta dabeecadda waa hab nololeedka Seychelles.
Xusuusnow in kasta oo safarku uu leeyahay saamayn togan oo badan, haddana, wuxuu waxyeello weyn u geysan karaa bey'adda isagoo culays dheeraad ah saaraya hab -nololeedka jilicsan oo gacan ka geysan kara sii -deynta qiiqa shidaalka. Seychelles, iyada oo ah abaalmarin ku guuleysata meel waarta oo ku taal gobolka Badweynta Hindiya, waxay haysaa socdaal mas'uuliyadeed oo qayb muhiim ah ka ah qaabkeeda ganacsi.
Waa kuwan shan waxyaalood oo booqdeyaashu samayn karaan si ay uga caawiyaan inay qayb ka noqdaan dhaqdhaqaaqa dalxiiska waara intaad ku jirto fasaxaaga Seychelles:
Baro meesha aad u socoto safarkaaga ka hor
Si aad u hesho waayo -aragnimo buuxda ee meesha aad u socoto, baro aqoonta gaarka ah ee Seychelles xitaa kahor intaadan imaan. Ka akhriso jasiirado kala duwan oo u heellan ilaalinta iyo ubaxyada iyo ubaxyada gaarka ah ee Seychelles si aad u ogaato meesha aad aaddo si aad u wanaajiso khibradaada.
Taageer tas-hiilaadka hoyga ku habboon iyo bixiyeyaasha adeegga safarka ee mas'uulka ah marka ay joogaan Seychelles. Wada -hawlgalayaal badan oo miyir -qab ah ayaa saamayn ku yeelanaya dhaqdhaqaaqyo yaryar xagga deegaanka iyagoo adeegsanaya tamarta la cusboonaysiin karo, iyagoo leh nidaam maareyn qashin oo wax -ku -ool ah, dib -u -warshadayn, ama xitaa dhismayaal iyagoo adeegsanaya agab la cusboonaysiin karo.
Markaad joogto Seychelles, waxaad yareyn kartaa raad -raacaaga kaarboonka adiga oo shaqaaleysiiya baaskiil si aad ugu safarto jasiiradaha yaryar sida Praslin iyo La Digue.
Waxba ha yeelin
Markaad booqaneyso jasiiradaha quruxda badan, ka taxaddar inaadan carqaladeyn nidaamka deegaanka jilicsan. Aad bay muhiim u tahay inaadan ka saarin wax soo saarka xoolaha ah, dhagaxyada, dhirta, abuurka ama buullada shimbiraha kana fogow taabashada ama istaagida meelaha dhifka ah. Marna ha ka saarin qolofka nool badda, hana ka iibsan badeecadaha ka samaysan qolofka qolofta ama noocyada kale ee halista ku jira, weliba waa sharci darro in sidaas la sameeyo.
Waxaa jira fursado ilaalin oo la yaab leh oo loogu talagalay dadka soo booqda inay ka qayb qaataan inta Seychelles laga bilaabo nadiifinta xeebta caadiga ah si ay uga qaybgalaan barnaamijyada dib-u-dhiska coral-ka oo aan la iloobin dhacdooyinka kale ee ilaalinta badda, booqdayaashu waxay kaa caawin karaan inay la xiriiraan bulshooyinka deegaanka ee maxalliga ah.
Jannadu waxay ku jirtaa halis iyada oo qashin ku daadata berriga iyo baddaba; xasuuso inaad mar walba qashinkaaga qaadato. Qashin -qubka sida bacaha ayaa waxyeello u leh nolosha badda sida kalluunka iyo qoolleyda, ugu dambayntii waxay ku dambaysaa silsiladda cuntada.
Biyuhu waa kheyraad qaali ah oo ku yaal jasiiradaha yaryar; intaad jasiiradaha ku jirto fadlan ilaali biyaha. Waxaad ku caawin kartaa inaad saamayn ku yeelato qaadashada qubaysyada gaagaaban iyo inaad dib u isticmaasho shukumaannada qubeyska halkii aad maydhi lahayd maalin kasta.